MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardRazer Gold mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
မြောက်များစွာသော Mobileနှင့်PC Gameများ/App များအတွက်
In Game item များအား Razer Goldတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
MPT မိုဘိုင်းဒေတာ အသုံးပြုသူတိုင်း Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends, Bigo, Tinder အပြင် မြောက်များစွာသော Gameများ/Appများအတွက် In Game item များ၊ Diamond များ၊ Gold Coin များအား Razer Gold portal တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
1. Razer Gold ဆိုတာဘာလဲ။
Razer Gold ဆိုတာ ဂိမ်းကစားသူများအတွက် Razer မှ တီထွင်ထားသော virtual wallet (credit) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းအတွင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန် Razer Gold ကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Razer Gold ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲပါက Razer Silver များအား လက်ဆောင်ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. Razer Gold ကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူနိုင်တာလဲ?
ဝယ်ယူရန် လင့်ခ် https://gold.razer.com/
3. Razer Gold နဲ့ ဘာတွေဝယ်ယူလို့ရနိုင်လဲ?
MPT ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် Mobile Legends, PUBG Mobile, Crasher Origin, Rohan M, Rules of Survival, Echo of Soul Phoenix အပြင် မြောက်များစွာသော Mobile နှင့် PC Game များအတွက် Diamond, UC အစရှိသော In-Game item များအား Razer Gold portal တွင် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
4. Applicable Surcharge(s) (30.00%) ဆိုတာဘာလဲ?
MPT ဖြင့် အသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူပါက (၃၀%)ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ် ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
5. Razer Gold (၉၀၀ကျပ်) ဖိုးအား MPT ဖြင့် ဝယ်ယူပါက Razer Gold Amount ဘယ်လောက်ရမလဲ?
Razer Gold ၆၃၀ Amount ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ၉၀၀ကျပ်+ (အခွန် ၄၅ကျပ်) = စုစုပေါင်း ၉၄၅ ကျပ်
6. Razer Gold ဖြည့်ခြင်းအောင်မြင်သွားသော်လည်း အကောင့်ထဲသို့ Razer Gold ရောက်မလာတာ ဘာကြောင့်လဲ။
အချို့သောဆာဗာနှောင့်နှေးမှုနှင့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများကြောင့် ရံဖန်ရံခါ ပုံမှန်ထက်ပိုကြာနိုင်သည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းကို စစ်ဆေးရန် Transaction History ကိုကြည့်ပါ။ Razer Gold ငွေဖြည့်သွင်းမှုသည် ၂၄ နာရီ ကြာသည်အထိ ‘ဆိုင်းငံ့’ နေပါက Razer Gold Custromer Support သို့အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
o Razer Gold Transaction အိုင်ဒီ
7. Razer Gold (၁၀၀၀ Gold) နဲ့ Mobile Legends Diamond (၄၁) တုံး ဝယ်ရင် အပိုထပ်ဆောင်းငွေ ကျသင့်ဦးမှာလား?
မကျသင့်ပါ။ သင့် Razer Account ထဲက (၁၀၀၀ Gold) ကိုသာ နှုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
(7) Is any more charges if I buy Mobile Legends Diamond (41) nos with Razer Gold (1000 Gold)?
No. Razer Gold (1000) would be deducted from your Razer Account.